निर्वाचन आयुक्तलाई नेताको प्रश्न–के गर्‍यो भने चुनाव रोकिन्छ ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
निर्वाचन आयुक्तलाई नेताको प्रश्न–के गर्‍यो भने चुनाव रोकिन्छ ?
५ बैशाख २०७९, सोमबार १३:४९
काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग चुनाव सफल पार्न विभिन्न तहमा सम्वाद गरिरहेको छ । तर पछिल्लो एक अन्र्तक्रिया भने अनौठो प्रकारको भएको छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, सत्ता गठवन्धनका नेताहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाइ अनौठो सवाल गरेका थिए ।
निर्वाचन सफल बनाउन गरिएको अन्र्तक्रियामा ती नेताले के गरयो भने चुनाव रोकिन्छ भनेर सोधेका थिए । छलफलमा नेताले संसद विघटन भयो भने चुनाव रोकिन्छ कि रोकिन्न भनेर सोधे । यसपछि निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग भएकोले चुनाव नरोकिने वताए ।
आर्थिक संकट भयो भने के हुन्छ भनेर यसपछि नेताले सोधेका थिए । अनि निर्वाचन आयुक्तहरुले आर्थिक संकटकाल लाग्यो भने चुनाव रोकिन सक्छ भनेर जवाफ दिए । यसपछि सत्ता गठवन्धनका नेताहरु उठेर हिडेको स्रोतको दावी छ । यसपछि भने वारम्वार चुनाव सार्ने प्रपञ्च भएको खवरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन ।